चिनले बनाएको कोरोना भ्याक्सिनको १०८ जनामा गरिएको परीक्षणको नतिजा यस्तो आयो – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/चिनले बनाएको कोरोना भ्याक्सिनको १०८ जनामा गरिएको परीक्षणको नतिजा यस्तो आयो
चिनले बनाएको कोरोना भ्याक्सिनको १०८ जनामा गरिएको परीक्षणको नतिजा यस्तो आयो
काठमाडौं। चीनमा विकास भइरहेको कोरोनाभाइरसको भ्याक्सिनले प्रारम्भिक परीक्षणमा निकै सकारात्मक नतिजा दिएको छ । १०८ जनामा गरिएको यो भ्याक्सिनको नतिजा निकै राम्रो आएको अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् । ट्रायलका क्रममा यो भ्याक्सिनले कोरोनाभाइरसविरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता विकास गरेको पाइएको छ । यो परीक्षणका विषयमा मेडिकल जर्नल द ल्यान्सेटमा रिपोर्ट प्रकाशित गरिएको छ ।
न्यूयोर्क टाइम्सको समाचार अनुसार रिसर्चरहरुले कैयौं प्रयोगशालाहरुमा यो भ्याक्सिनको अध्ययन गरेका थिए । चीनको एड फाइभ नाम दिइएको यो भ्याक्सिनलाई क्यानसिनो बायोलोजिक्सले विकास गरेको हो । यो भ्याक्स्निलाई बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अमेरिकाको मोडर्नाले विकास गरिरहेको भ्याक्स्निभन्दा अगाडि मानिएको छ । यो वर्षको सुरुदेखि नै चीनमा भ्याक्स्निको ह्युमन ट्रायल सुरु भएको थियो ।
यो भ्याक्स्निका केही सामान्य साइड इफेक्ट देखिएका छन् । शरीर दुख्ने र ज्वरो आउने साइड इफेक्ट देखिएको भए पनि यी लक्षण एक महिनाभित्र आफैं हराएर गएका थिए । भ्याक्स्निबाट कुनै गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको देखिएको छैन । अनुसन्धानमा पाइएअनुसार भ्याक्सिन दिइएको २८ दिनपछि व्यक्तिको शरीरमा प्रतिरोधी क्षमता सबैभन्दा अधिक थियो । खोप लिनेहरुको शरीरमा भ्याक्स्नि दिइएको दुई हप्तामा एन्टिबडी विकास हुन सुरु भएको थियो र २८ औं दिनमा उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
मालदिभ्समा काम गुमाएर अलपत्र परेका नेपालीको घर फर्किने चाहाना कहिले होला पूरा ?
ओलीको राजीनामा टरेकै हो ? यसो भन्छन् पाण्डे ? (भिडिओसहित)
भोलिबाट देशभर जोरविजोर लागू
म दुईटा श्रीमान राख्छु, मान्छ त यो समाज ? दुई श्रीमतीलाई सहज ठान्ने समाज किन दुईटा श्रीमान राख्न दिंदैन ?